Zonke amantombazane ukudlala ngonodoli. Lezi amathoyizi baphakathi kwabokuqala ukuvela nursery, ekujaheni ukuba ahlukane nazo intsha, nowesifazane ngezinye izikhathi ngisho esekhulile. Ngaphandle doll, isendalini namuhla, ungathola ezihlukahlukene izesekeli, kanye ifenisha kanye yonke indlu. Kodwa ngaso sonke isikhathi esitolo Yilokho okudingayo. Futhi ukuze abalandeli eziningi onodoli uthanda ukwakha ezinye izinto ngabo ngezandla zabo. Yini engenziwa ekhaya, ngaphandle kokuba okuyinhloko? Noma: izingubo, ifenisha kanye ezihlukahlukene amageyimu nemininingwane ingaphakathi - yezandla enjalo onodoli ungalenza.
Ngisho noma ungenayo ukuhlela ukwakha indawo ekhethekile ukudlala noma usuvele unayo indlu ezincanyana unodoli izingubo kudingeka. Akubalulekile ukuba umthungi onekhono - abaningi ikhabethe izinto kulula thunga ngaphandle amaphethini, lekubazeni izingxenye indwangu "ngokubona". Khuthaza ingane yakho ukuba iphumelele yezandla for onodoli ndawonye. T-shirt akunzima ukwenza kusuka preform T-ezimise nge oluvundlile slotted phakathi entanyeni iDemo. Skirt kungenziwa eyenziwe ngendwangu isikwele kwesokudla sibalo, kubutsela ibhande okhalweni umphetho "inaliti Phambili" noma ngokufaka sezinsini. zama kuphela lezi yezandla onodoli, futhi nakanjani ngeke alibale inqubo kangangokuba ngokushesha uzoba closet ithoyizi noma ngabe isiphi isikhathi.
Beat ezihlukahlukene ezimweni zansuku zonke e endlini unodoli lula kakhulu, lapho isandla luwukudla ezincanyana izitsha nezinye izesekeli. Eziningi zalezi izinto kungadalwa ngezandla zabo. Inkinga enkulu ngokuvamile kuphakama kusukela ukugcwaliswa ekhishini. Ukuze ukuthengwa iqoqo ifenisha ngokuvamile unamathisele inombolo encane izitsha, amasethi miniature angathengwa ngokwehlukana. Kodwa lokho egcwele amapuleti izibuko? Zama ukwenza imikhiqizo kanye ukudla ngomumo-ngebumba nofana polymer nobumba. Suit nezinye uquqaba ngoba yokumodela, ezifana usawoti inhlama. Lezi izinto akunzima ukudala izitsha, isitsha sezimbali, zezibani nezindebe zangaphakathi. Izingane futhi uthanda ukwakha ezifana yezandla onodoli. Izandla zakhe uma uthanda, ungenza izinto eziningi - kusukela orange kanye ucezu ushizi ukuze isidlo ngamaqanda ngiyocasha noma vase bamphathele.
Doll ifenisha udoti impahla
Ngakho, usunayo izingubo onodoli futhi ezihlukahlukene izesekeli for the game, futhi lokho kusho ukuthi sekuyisikhathi sokuba uqhubekela ukukhiqizwa ngaphezulu izinto eziyinkimbinkimbi. Doll ifenisha - yilokhu njalo entula emkhakheni endodakazini yakho. Futhi ngisho noma uthenga izinto ezimbalwa ngomumo eyenziwe, ngokushesha ngempela udinga esinye usofa encane noma itafula ohlangothini. Ukuze womshini izinto ingaphakathi upopayi ungasebenzisa noma yini: amakhadibhodi, igwebu, isembozo imikhiqizo eziyisikhumbuzo eyenziwe ngepulasitiki ne-paper. Ngokwenza lezi yezandla onodoli, xhuma umcabango kanye namakhono akho ezihlukahlukene amasu ngenalithi. Iphele ifenisha kungenziwa zaveza futhi varnished, ukuhlobisa nge stickers noma upholstered. Zama ukuhlobisa amatafula kanye izingubo zokugqoka kuleli su Decoupage. Uma uneminye ukulungisa noma lodonga ingcina eteyipini, zisebenzisa lezi zinhlobo zezindwangu.
Ifenisha eyenziwe iimbumbeko kanye amakhadibhodi
Indlela elula ukwenza yezandla aphume onodoli iphepha, kodwa le nto kunalokho usengozini futhi ibingaba eyesikhashana ngempela. Okuhluke kakhulu kunjalo sabafowabo main - amakhadibhodi. Sika futhi ungagobisi amashidi amakhadibhodi akuzona eziyinkimbinkimbi kakhulu kangakanani, ifenisha ngomumo kuvela uqine futhi enhle ne eliphezulu design. Sebenzisa noma iyiphi ibhokisi noma uthenge amakhadibhodi amashidi zokubhala. ifenisha Original obusebenzayo kungenziwa wabuthela kusuka iimbumbeko. Okuhle kunakho konke ukuthi benza ekhabetheni (isilinganiso esifanele glue amabhokisi endaweni ukucushwa efanelekayo). Ukusebenzisa kuphela ingaphakathi ibhokisi okufanayo, ungenza eshalofini engajulile. Uma wayefisa, kusukela amakhadibhodi ungafunda ukwenza ukuma ngempela eziyinkimbinkimbi komkhiqizo. Isexwayiso: isimo sikuvumela ukuba usike lukathayela amakhadibhodi zokubhala ummese, futhi izakhi ngabanye kungenziwa ethe njo PVA.
Isitayela "Monster High"
Kuze kube muva nje, wonke amantombazane baphupha Barbie onodoli ngihlala endlini pink. Kodwa akunjalo kudala, blonde main Petite uvele imbangi ayakufanelekela. Onodoli "Monster High", ezidalwe zisuselwa "Isikole izilo" opopayi namuhla adume emhlabeni wonke. Ngokwe-Abadali, ikhathuni lifundisa ukubekezelelana. Likhuluma ngamaphathi yokuphila kwezingane izilo ezihlukahlukene, okuyinto, naphezu kokubukeka yayo imigodi imikhuba efana intsha njalo, wenze abangane, ukuxabana futhi zakha, ukuthandana futhi uthathe izivivinyo. Uma une lab 'onodoli, ungafuna ukwenza yezandla for bamapulangwe "Monster High" ngezandla zakhe. Nokho, i-ubuhle enjalo ifenisha kanye izesekeli kungase kungabi zonke "ithoyizi" noma afana nozakwabo bangempela. uhlamvu ngalunye isitayela sakhe siqu esiyingqayizivele kanye izintandokazi. Lungela ukwenza embhedeni ngesimo amathuna nezindawo zokungcwaba ngakho ukuhlobisa amatafula ngemigwalo Izitshalo ezidla - konke lokhu uthando "Monster High" (unodoli "Isiqophi" yezandla for Monster High »-. Lona omunye umthombo ugqozi, ukholwa, ngoba abaningi needlewoman ukwenza okuthile mathupha . imfashini onodoli main theme :. umbala omnyama pink ugebhezi Nokho, ukuhluka kunokwenzeka phakathi izinhlamvu kukhona indodakazi isilo sasolwandle, nezingane werewolf futhi vampire indodakazi.
Dolls yezandla "Monster High": ifenisha kanye izesekeli
Ingaphakathi izinto ezimnandi ukwenza okungcono, ucabangela isithombe kanye nezici ezithile doll. Nokho, uma izinhlamvu ezimbalwa, futhi umdlalo isikhala kukhawulwe, ungakhetha isitayela jikelele yochungechunge ngokokuhlobisa: imibala emnyama nokukhanyayo, ukusetshenziswa izingebhezi kanye amalulwane decor. Ngokukhethekile ukudala amafomu eziyinkimbinkimbi, ngisho ifenisha kakhulu elula ukubukeka stylish umxhwele lapho zipendwe ngemibala inkampani "Monster High." Engeza solemnity Ingaphakathi: Sebenzisa canopies, draperies angenisa ukukhanya, lace izindwangu shiny.
Uma une isikhala esanele kanye nesikhathi ukusebenza, ungazama ukwakha ikhaya lazo dolls. Okokuqala sidinga ukulungisa phansi. Inketho elula - ukusebenzisa ngokokuhlobisa unodoli endlini amakhadibhodi ibhokisi kusuka lisebenze ekhaya noma kancane kancane. Sinemandla ngeke ukuklama, uma ukudala it out plywood noma chipboard. A kukho olukhulu amavila - ngomumo ukusebenzisa etafuleni eliseceleni kombhede ubudala noma eshalofini. Ngakho, une ngesisekelo endlini unodoli, ngesicelo siyasibona kakade ukusungula ukwahlukanisa (noma nail glue - kuncike impahla) futhi ukukhomba indawo izitebhisi. Qhubeka imisebenzi kokuqeda: namathisela phezu kodonga nge lodonga noma ifilimu zokuhlobisa, phansi ungafaka linoleum yangempela noma oilcloth. Ngezinye ngiqume ewindini noma abenze izicelo ubunjiniyela, usebenzisa izithombe ezifanele kusukela omagazini. Ready endlini obstavte ekhishini esikhashana - futhi ungakwazi ukugubha Housewarming. Dala yezandla for onodoli ngezandla zabo empeleni lula ngempela. Into esemqoka - nje ukuze uqale, ngemva kwalokho kuyovela imibono emisha angesabi. Lona wokuzilibazisa nosizo nehuha wonke umndeni, okuyinto akudingi ukutshalwa ngemali okukhulu.
Hack Beautiful Cosmonautics Day ngezandla zabo
Monkey amabhola - ithoyizi fun for ingane
Legends, izinganekwane kanye izimfihlakalo eMoscow Metro
Hlobo luni owesifazane? igama Oksana Inani